မန္တလေး မြို့မှာ စီးပွားရေးအရ ရင်းနှီးမြုပ်နှံချင်သူတွေအတွက် အကောင်းဆုံး City Star Shopping Square
သင်ဟာ စီးပွားလုပ်ငန်း တစ်ခုမှာ အမျှော်အမြင် ရှိသူတစ်ယောက်လား?
ဒါဆိုရင် အောင်မြင်မယ့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ စတင်လို့ရတဲ့ နေရာတစ်ခု မန္တလေးမှာ ရှိတယ်ဆိုတာ သိပြီးပြီလား?
အဲဒီနေရာကတော့ Cathay Real Estate Development မှဆောက်လုပ်ထားတဲ့ City Star Shopping Square ရှိနေပါပြီ..
► မန္တလေးမြို့ ၊ ပြည်ကြီးတံခွန် မြို့နယ် အတွင်းမှာရှိတဲ့ မင်းကြီးရန်နောင်လမ်း နှင့် ၄၈ လမ်း ထောင့် ၊ မန္တလေး - ပြင်ဦးလွင် - လားရှိုးသွားလမ်းမကြီးအနီးမှာ တည်ရှိပါတယ်.။
► မြေအကျယ်အဝန်း ၁၇၀၀၀ စတုရန်းပေပေါ်မှာ ပေ ၂၀ x ၆၀ အကျယ်အ၀န်း ရှိသော ၃ထပ် အဆောက်အအုံ များဖြင့် Shopping House ပုံစံတည်ဆောက်ထားပါတယ်
အထူး Discount ရရှိဖို့
ဘယ်လို Shop House မျိုးတွေပါလဲ ?
►မင်းကြီးရန်နောင်လမ်းမပေါ်ရှိ ၄ခန်းတွဲ အဆောက်အဦး
►၄၈ လမ်းမကြီးပေါ်ရှိ ၇ခန်းတွဲ နှင့် ၂ခန်းတွဲ အဆောက်အဦး
► မြရည်နန္ဒာ ဈေး
►(၈) ရစ်ချက်စတာစကေး အထိ ငလျင်ဒဏ်ခံနိုင်ခြင်း။
► မြေညီထပ်အမြင့်(၁၆) ပေရှိသောကြောင့် ထပ်ခိုးဆောက်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
► ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာ ခေတ်စားတဲ့ ဘယ်တော့မှမရိုးနိုင်သော Neo Classic Archietect ပုံစံဖြင့်တည်ဆောက်ထားခြင်း
► MME စနစ်တွေနဲ့ အဲကွန်း ပိုက်လိုင်းတွေကို Under Wall System အသုံးပြုပေးထားသည့်အတွက်မီးဘေး အန္တရာယ်ကိုကာကွယ်ပေးခြင်း
► နှစ်ပေါင်း(၃၀) ခံတဲ့ Marble Paint ဆေးအသုံးပြုထားခြင်း။
► အဆောက်အအုံရဲ့ ရောမတိုင်လုံးနှင့် အခြားသော အလှဆင်ပစ္စည်းများကို နော်ဝေနိုင်ငံနည်းပညာအသုံးပြုထားတဲ့ EPS & GRC System နဲ့ အလှဆင်ထားခြင်း
Cathay Real Estate Development ဟာ Tawain နိုင်ငံရှိ China Medical University Asia University Government Factory Residence စတဲ့ နိုင်ငံတကာ အဆောက်အအုံတွေကို ဆောက်လုပ်ပေးနေတဲ့ Wen Yi Construction Co.,Ltd ကုမ္ပဏီနဲ့ ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် Wen Yi Construction Co.,Ltd နဲ့ ဆောက်လုပ်ရေး နည်းပညာတွေ ၊ အင်ဂျင်နီယာတွေပူးပေါင်းပြီး ရန်ကုန်မြီု့နဲ့ မန္တလေးမြို့တွေက အဓိက အဆောက်အအုံတွေကို ဆောက်လုပ်ပေးနေတဲ့ ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။